Paul Pogba Oo Go'an Ka Qaatay Mustaqbalka Manchester United Ee La Hadal Hayo
HomeWararka CiyaarahaPaul Pogba oo go’an ka qaatay Mustaqbalka Manchester United ee la hadal hayo
Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa in uuna wax go’aan ah ka qaadan doonin mustaqbalkiisa Manchester United ilaa bisha April.
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ee Old Trafford ayaa dhacaya bisha June ee soo aaddan, Red Devils ayaana ilaa hadda awoodi weyday inay heshiis la gasho ciyaaryahanka khadka dhexe oo ku saabsan heshiis kordhin.
Real Madrid , Juventus , Paris Saint-Germain iyo Barcelona ayaa dhamaantood la rumeysan yahay inay si dhow isha ugu hayaan horumarka ku xeeran xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay AS , wakiilka 28 jirka Mino Raiola ayaan ka hadli doonin mustaqbalka macmiilkiisa ilaa ugu yaraan bisha Abriil.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Red Devils ay si aad ah uga walaacsan tahay in ciyaaryahanka khadka dhexe uu si xor ah uga tagi doono Old Trafford sannadka dambe.
Pogba ayaa caawiye ka noqday 7 caawin 11 kulan oo uu u saftay 20-jeer horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan, laakiin keydka ayaa la dhigay kulankii Arbacadii ee Champions League ee Atalanta BC.